मधेशीको सहादत मेयर, उपमेयर वा मुखिया पदका लागि होइन ः रम्भा मिश्रा - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 Interview मधेशीको सहादत मेयर, उपमेयर वा मुखिया पदका लागि होइन ः रम्भा मिश्रा
मधेशीको सहादत मेयर, उपमेयर वा मुखिया पदका लागि होइन ः रम्भा मिश्रा
ठूला दलहरूले जहिले पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मधेशवादी दलहरूसँग सम्झौता गर्छन् र जब उनीहरूको स्वार्थ पूरा भइसकेपछि हाम्रा मागहरूलाई बेवास्ता गर्दैआएका छन् । हामी पटक–पटक धोका पाइरहेकोले हामी समर्थन फिर्ता लिने मनसाय बनाएका छौं ।
सरकार ढाल्न वा सरकार बनाउन हामी समर्थन दिने वा फिर्ता लिने गरेका छैनौं । हामीले आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि समर्थन गरेका थियौं । तर, हामीसँग गरिएको प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि समर्थन गरिरहनुको कुनै औचित्य रहँदैन ।
जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन भने आगामी असोज २ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार मात्रै गर्दैनौं विथोल्छौं ।
यो सरकारले सेना परिचालन गरेर, मधेशीहरूलाई बन्दी बनाएर, तराई–मधेशमा भयत्रासको वातावरणमा चुनाव भएको हो । निर्वाचन भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, जसमा जनताले भयरहित वातावरणमा मतदान गरोस् तर, सरकारले मुलुकको आधा जनसंख्या रहेको मधेशी समुदायलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गराएकै हो ।
नयाँ संविधान पनि त बन्दूकको बलमा जारी ग¥यो तर, अहिलेसम्म किन लागू हुन सकिरहेको छैन । संविधानका त्रुटिहरू नसच्याएसम्म लागू हुनैसक्दैन । त्यस्तै, सरकारले अहिले बलजबरजस्ती सेना लगाएर चुनाव गरायो । तर, हामीलाई यो चुनावमा मान्य छैन । यो निर्वाचन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हामी भनेका छौं । सरकारले तेस्रो चरणमा पनि सेना परिचालन गरेर तराई–मधेशमा निर्वाचन गराउन सक्छ तर, त्यो निर्वाचन सफल हुँदैन ।
हाम्रो माग पूरा भएन भने तेस्रो चरणमा हामी कडारूपमा प्रतिवाद गर्छौं । सरकारले हामीलाई प्रदेश नं. २ मा मात्र सीमित ग¥यो तर हामी मधेशका २२ वटै जिल्लामा बहिष्कार गरेका छौं । सेना लगाएर जबरजस्ती निर्वाचन गर्न खोजियो भने त्यसको परिणाम भयावह हुनेछ ।
निर्वाचनमा भाग लिएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले बाटो बिराएको छ । फोरमले शासक दलहरूसँग चुनावी सहकार्यसम्म पनि गरेको छ । फोरमले आफ्नो नैतिकता बिर्सेको कारणले गर्दा नै आज मधेशमा आक्रोश देखिएको छ ।
० मधेश केन्द्रित दलहरू फोरम नेपाल, लोकतान्त्रिक फोरम र राजपाबीच जुन किसिमको मतभिन्नता देखिएको छ, आगामी दिनमा तपाइँहरूबीच सहकार्यता हुने सम्भावना कतिको छ ?
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमले बाटो बिराएर अवसरवादीको रूपमा देखा परेका छन् । मधेशको माग सम्बोधन गराउनका लागि यदि उहाँहरू हामीसँग मिलेर आन्दोलनमा आउनुहुन्छ भने हामीलाई आपत्ति छैन । उहाँहरू अवसरवादी हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर, कोही आफ्नो घर फर्किन चाहन्छन् भने हामी स्वागत गर्छौं ।
० राजपाबाट कोही कोहीले स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका छन, यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?
राजपाका जस–जसले निर्वाचनमा भाग लिए उहाँहरू अब राजपाका सदस्य रहनुभएन । जो जित्नु भएका छन् उहाँहरूलाई बधाई छ तर, उहाँहरू अब राजपामा रहनुभएन । किनभने राजपाले सुरूदेखि नै निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ ।
सरकारले मधेशको न्यूनतम् मागहरूसमेत पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । संविधानमा यति धेरै त्रुटिहरू छन् कि लागू हुनैसक्दैन । त्यसैले, त्रुटिपूर्ण संविधानलाई लागू गराउने षड्यन्त्रमा हामी सहभागी हुँदैनौं । मधेश आन्दोलनमा मधेशी सपूतहरूले दिएको बलिदानी मेयर, उपमेयर अथवा मुखिया पद पाउनका लागि थिएन । मधेशी शहीदहरूले जुन कुराका लागि सहादय दिएका छन् त्यो पूरा नभएसम्म निर्वाचन सहभागी हुने नैतिकताले मान्दैन । नेतृ, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, (मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
#Breaking #Headline1 #Interview